ख्याल गर्नुहोस्! मुखमा फोहोर कुहिए श्वास गनाउँछ | latestnepali.com
ख्याल गर्नुहोस्! मुखमा फोहोर कुहिए श्वास गनाउँछ
मानव स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नु पर्ने कुरा धेरै छन्। सामान्य असावधानी कै कारण यस्ता समस्या पनि बढाउने गरेका छन्।यही समस्या मध्येको एक हो श्वासप्रश्वास गनाउने समस्या । ठूला सभा समारोह तथा गेटटुगेदरमा जाँदा धेरै व्यक्ति टाढा एकान्तमा बस्ने गर्छन्। मुख र श्वास गनाउने समस्याका कारण समूहमा घुलमिल हुन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ ।
श्वास पेटमा हुने खराबीका कारण गन्हाउँछ । अर्को कारण हो मुखको सफाइ । मुख गन्हाउने अधिकांश समस्या मुख, गिंजा र दाँतकै समस्याबाट सिर्जित हुन्छन् । हामीले खाएका खानेकुरालाई दाँतले टुक्रा–टुक्रा पार्छ र जिब्रोले पन्यूले जसरी चलाएपछि र्‍यालले मुलायम बनाएर निल्न सहयोग गर्छ।
दाँतले त्यसरी खानेकुरालाई टुक्रा-टुक्रा पार्दा दाँतको चेप-चेपमा खानेकुरा अड्किन्छ। त्यसलाई समयमै निकाल्न सकिएन भने हाम्रो भान्साको फोहोर जसरी नै कुहिन्छ र गन्ध फ्याँक्न थाल्छ । त्यही गन्ध नै धेरैको समस्या बन्ने गरेको छ ।
जिब्रोको बाहिरी भागमा टासिने फोहोरका कारण पनि दाँत गन्हाउने समस्या देखा पर्दछ । यसका लागि पनि सरसफाइ नै उपयुक्त बिधि हो। बंगारातिरको दुई दाँतबीचमा ठुलो चेप छ भने पनि त्यहाँ खाना अड्किन्छ। त्यो समयमै निकाल्न सकिएन भने कुहिन्छ र गन्हाउँछ ।
किराले दाँत खाएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको पनि श्वास गन्हाउँछ । दाँत किराले खाएर ठूलो ढाँड बनिसकेका हुन्छन् । त्यो ढाँडमा नजानिँदो पाराले अड्किएका खानेकुरा लामो समयसम्म बसेर गन्ध निकाल्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ ।खैनी, चुरोट आदिको लतका कारणले पनि मुख गन्हाउन सक्छ । लसुन, प्याजजस्ता खानेकुराले पनि श्वास गन्हाउने गर्दछ ।
समितिकाे निर्देशन मान्दैनाैँ, आईफा अवार्ड गरेरै छाड्छौं : प्रधानमन्त्री
यी १० खानेकुरा, जसले बढाउँछ पुरुषत्व